वसन्त : खेतीपातीको नयाँ वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
वसन्त : खेतीपातीको नयाँ वर्ष
उत्तरी गोलार्द्धमा दिन लामो हुन थालेसँगै बीउ, बोटबिरुवाको सक्रियता बढ्छ । अर्को अर्थमा, सृष्टि थाम्ने वार्षिक गतिविधि बढ्छ ।
फाल्गुन १०, २०७७ कृष्ण पौडेल
हिमालमा गयो जाडो लोक साऽनन्द देखियो
उदायो रसिलो राम्रो ऋतु राज वसन्त यो ।
नाम शेष भयो सारा पुरानो शिशिर स्थिति
लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति ।
कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले उपर्युक्त पद्य १०५ वर्षअघि वसन्त ऋतुका बारेमा लेखेका हुन् । उनले ‘ऋतुविचार’ खण्डकाव्यमा यसरी नै सबै ऋतुको सटीक वर्णन गरेका छन् । माथिका कवितापंक्तिले वसन्त आगमनको महत्त्वलाई उजागर गरेका छन्, प्रकृति–मानव सम्बन्ध अनुपम रहेको खुलाएका छन् ।
अंग्रेजीमा ‘स्प्रिङ’ भनिने र उत्पत्तिको अर्थ राख्ने यो याम वार्षिक जीवन–ऊर्जाको मुख्य आधार हो । हामी उत्तरी गोलार्द्धको हिमालय शृंखलाको काखमा अवस्थित छौं । हरेक वर्ष यति नै बेला यो पाखोको जीवन–ऊर्जाका लागि प्रकृतिको बैंस फर्किन्छ । अहिले हामीले जीवनचक्रको यो पेचिलो सत्यलाई आत्मसात् गर्न छाडेका छौं, जसका कारण मानव–प्रकृति अन्तरसम्बन्धको जालो निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको छ । परिणामतः खाना, खेतीपाती, जलवायु र समग्र प्रकृतिमा व्यापक फेरबदल आएको छ ।
हाम्रो यस्तो ऊर्जाशील वसन्तको सुरुआत अर्थात् हाम्रो जीवन–ऊर्जाको पात्रो माघे झरीले हिउँदमा धुम्मिएको मधेस खुलेसँगै, शीतलहर र पहाडको सिरेटो सकिएसँगै सुरु हुन्छ । यही बेला प्रकृतिले उत्तरतर्फ ढल्किने पृथ्वीको सतहमा वार्षिक जीवन–ऊर्जाका लागि उपयुक्त घामपानीको बन्दोबस्त मिलाउँछ । हिउँदमा सुषुप्त रहेको हावापानी घामको तातोले सक्रिय हुन्छ । यसले नै हाम्रो जीवन–ऊर्जाको मूल आधार वनस्पति जगत्मा रौनक ल्याउने हो । यही ऊर्जाका आधारमा समग्र जीवन पद्धति चलायमान हुन्छ ।
धेरै वर्षदेखि यस्तो झरी भने राम्ररी हुन सकेको छैन । यदाकदा हुने हिउँदे झरी पनि सबैतिर भएको छैन । खास गरी मध्यपहाड र तराईमा माघे झरी त हुनै छोडेको छ । हप्तादिनभन्दा बढी हुने झरी हामीले प्रकृतिलाई तहसनहस बनाउँदै लगेकाले सुस्ताउँदै गएको हो । काठमाडौं खाल्डोमा पोहोरसम्म एक–दुई दिन परेको पानी यो वर्ष दुई–चार छिटा परेर टर्‍यो ।
यसरी हप्तौंसम्म पर्ने झरी अब कवितामा मात्रै सीमित हुने जोखिम बढेको छ । यसलाई उस्तै गरी फर्काउन त कति सकिएला, तर प्रकृतिसम्मत खेती प्रणाली अपनाएर स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वस्थ खान पाउने हाम्रो र भावी पुस्ताको हक स्थापित गर्न भने अझै पनि सकिन्छ । तर यो मर्म आत्मसात् गर्ने किसानीको गौरवमय परम्परा उन्नत बनाउनु यसको पूर्वसर्त हो ।
यस गोलार्द्धमा खानाका लागि गरिने उत्पादनका मुख्य सबै कर्म र प्रकृतिको सृष्टि थाम्ने मर्मको सम्मान विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्वहरू, जस्तै : वसन्त पञ्चमी, शिवरात्रि, होली, उँधौली, सतुवान उत्सव मनाएसँगै सुरु गरिन्छ । यी उत्सवहरू खानाका लागि खेतीपाती गर्ने किसानले सृष्टि थाम्न जुरमुराएको बीउ, पालुवा र फक्रिँदै गरेको कोपिलाको स्वागत गर्ने उत्कृष्ट अवसर हुन् । यस्ता अरू हजारौं उत्सव विभेदको पर्खालमा चेपिएर बसेका छन् । यी संस्कृतिलाई यिनै बीउजस्तै उम्रिन, हुर्कन र कोपिलाजस्तै फक्रिन र फल्न दिने दिन कहिले आउला ?
उत्तरी गोलार्द्धमा दिन लामो हुन थालेसँगै बीउ, बोटबिरुवाको सक्रियता बढ्छ । अर्को अर्थमा, सृष्टि थाम्ने वार्षिक गतिविधि बढ्छ । वसन्तको आगमनसँगै जसरी प्रकृतिले आफ्नो वार्षिक ऊर्जा व्यवस्थापनको तयारी गर्छ, त्यसरी नै किसानले पनि आम मानिसका लागि चाहिने ऊर्जाका लागि खानेकुरा उब्जाउने तयारी गर्छन् । यसो गर्ने किसानका आफ्नै ठाउँका खेती संस्कृति छन् । यिनै संस्कृतिलाई उन्नत बनाउँदै हजारौं वर्षदेखि किसानले खानाका लागि गरिने खेतीपातीको प्रणाली निरन्तर परिष्कृत गर्दै लगेका छन् । माटोदेखि थालसम्म खानेकुरा जोहो गर्ने यो परम्पराका सबै ज्ञान, सीप र कौशलहरू प्रकृतिका यिनै गतिशील ऋतुहरूमा आधारित छन् ।
माथि भनिएझैं वसन्त ऋतु प्राकृतिक उत्पादनको मुख्य समय हो । यही समयमा बीजारोपण गरिने खेतीपातीबाटै हाम्रो समग्र खानेकुराको बन्दोबस्त हुने हो । प्रकृतिको यो उत्पादनशील मौसममा खानेकुराको जगेर्ना गर्ने र अन्य प्रतिकूल मौसममा मानवीय उन्नतिका अन्य आयामको तयारी र बन्दोबस्त गरिन्छ । ऋतु फेरिएसँगै वस्तुभाउ र परिवारका साथ गरिने उँधौली–उँभौली, बसाइँसराइ, भोटदेखि नुन र हिमालदेखि जिम्बु लिएर तराईसम्म अन्नपात साट्न, आग्रादेखि चुरा धागो पोते सियो बेच्दै हिमाली बस्तीसम्मको सबै यात्रा यिनै बन्दोबस्तका लागि गरिन्छन् । हाम्रो यस्तो बन्दोबस्तका सबै सारथि यही बेला सँगै जुरमुराउँछन् । चराचुरुंगी, कीराफट्यांग्रा र साना–ठूला वन्यजन्तुसमेत खानपानको बन्दोबस्त मिलाउँदै सन्तान उत्पादनमा सक्रिय हुन्छन् । हजारौंको बथानमा हजारौं कोसको उडान भर्नेर् कराङकुरुङ, गौंथली, मलेवा, सुगा अब हाम्रा स्मृतिमा समेत ओझेल पर्दै छन् ।
हजारौं वर्षदेखि सुरु भएको खेतीपातीको यो महायात्रा मानव सभ्यता र जनसंख्या वृद्धिसँगै सर्वत्र फैलिएको हो । तर यो आधारभूत सत्य प्रकृतिदोहनको यात्रासँगै औपनिवेशिक सत्ताको बलमिच्याइँमा पर्‍यो । यसबाट हाम्रा परम्परागत ज्ञान, सीप र कौशल ओझेलमा मात्र परेनन्; साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर जरैदेखि उखेलिए । हाम्रो प्रकृतिसम्मत जीवन पद्धति निरन्तर विघटनको बाटामा छ । यसको आभास त बेलाबेला थपिएका विपत्ति र महामारीले समेत गराउँछन् । तर यसको गर्भमा भने खानाका लागि गरिने खेतीपातीको मर्मविपरीत केवल नाफाका लागि गरिने उत्पादन र यसका लागि मात्र उपयोगी सोच, ज्ञान, सीप र प्रविधिको विकास छ । अहिले प्रकृतिको जीवनचक्रलाई चरम बेवास्ता गरिएको छ ।
हाम्रो ऊर्जाको वार्षिक बन्दोबस्तको यो परम्परा उल्ट्याएर सहरी बसाइ र बेमौसमी उत्पादनको सीमित घेराभित्र नाफाका लागि बाँच्ने बिचौलिया जिन्दगीमा मात्र रमाउने सामाजिक व्यवस्था र यस्तो चेतना मात्र बढाउने शिक्षा पद्धतिको सिको गरेर नै हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका हौं । हामीले बेमौसममा फलाउने र विष खाने तरिका अपनाएर आफूलाई मात्र हैन, भावी पुस्ताको जीवनको मूल आधार माटो र प्रकृतिलाई पनि विषाक्त बनाएका छौं ।
आधुनिक कृषि विकासका कार्यले यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दैनन् । बरु उल्टै आधुनिक हुने नाममा कृत्रिम मौसम र हावापानी अनि रसायनको बन्दोबस्त गरी धेरै नाफा कमाउने भन्दै बेमौसममा फलाउने सघन एकल बालीको होड नै चलेको छ । यसले माटो, प्रकृति र खानेकुरा विषाक्त बनाउँदै लगेको छ । हिजोआज खेतीपाती खानका लागि गरिँदैन, बेच्नलाई मात्र गरिन्छ । किसानलाई बिचौलिया र व्यापारीले विस्थापित गर्ने क्रम जारी छ । माटोको जीवात्मा मरेको छ । जैविक विविधता विघटनसँगै प्राकृतिक ह्रासले जलवायु र वातावरणमा गहिरो संकट थपिँदो छ । विषाक्त माटो र प्रकृतिको नसर्ने दीर्घरोग दिनदिनै बढ्दै छ ।
झन्डै दुई हजार वर्षअघि सुरु भएको प्रकृतिदोहनको मूल मान्यतामा आधारित रोमन साम्राज्यको प्रकृतिमाथिको विजय र व्यापारका लागि गरिएको समुद्री यात्रा औद्योगिक विकासको जग हो । यसैलाई विस्तार गर्न गरिएको विज्ञान र प्रविधि मात्र उन्नत जीवनको आधार हो भन्ने वैचारिकीसँगै हाम्रो मौलिकताको विघटन यात्रा सुरु भएको हो । यसले नै हाम्रो ज्ञान निर्माणको मौलिक परम्परामा व्यापक फेरबदल ल्याएको हो, जसको अग्रभागमा हामीले अपनाएको बाह्य ज्ञानमा आधारित कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको मुख्य योगदान छ ।
यी कुरा बुझ पचाएर गरिने खाना र खेतीपातीको विलापले मात्र अब हाम्रो कृषि सप्रिँदैन, बरु दिनदिनै दुर्घटित हुँदै जान्छ । प्रकृतिलाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने किसानको विवेक र हाम्रा पुर्खाले ऋतु विचारसहित बाँधेको प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्धको डोरो बलियो बनाएर मात्र हाम्रो खाना र खेतीपाती सप्रिन्छ । विज्ञानको चमत्कारले प्रकृतिका नियम बुझेर हाम्रो जीवन सरल बनाउन त सकिएला, तर खाना र खेतीपातीको संकट यस्तै बढिरहे विज्ञानको ल्याकत नै कति रहला ? यसको छनक त कोभिड–१९ बाट आतंकित आधुनिक मानव सभ्यताको हैसियतले नै देखाइदिएको छ ।
यस्तो उल्टो यात्रा नहिँड्न सार्थक पहल गरिएन भने खानाका लागि गरिने खेतीपातीको विघटनसँगै हाम्रो सभ्यतासमेत लोप हुने निश्चित छ । उन्नत समाज र यसको नेतृत्व फेर्न गरिने तेस्रो आन्दोलनको जग हाल्न तम्सेका वसन्तजस्तै ऊर्जावान् युवा पुस्ताले गर्दा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था त फेरिएला तर यो मर्म आत्मसात् गर्न र आफैंलाई फेर्न तयार नभए आम मानिसको जिन्दगीमा बहार भने आउनेछैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१७
‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित
फाल्गुन १०, २०७७ वर्षा झा
सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबै उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउँथे र नेपाल यस्तो व्यवस्था गर्ने विश्वकै १५ औं मुलुक बन्थ्यो । तर, सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायम छ । प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखेको छैन । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली चिरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्ण रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन ।
राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा निहित हुनुपर्छ । उम्मेदवारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको रक्षार्थ मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नागरिक अधिकार ऐन–२०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ ले अभिमतको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् ।
ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले भनेका थिए— समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएका व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस अधिकारको स्थान कस्तो रूपमा रहेको छ भन्ने उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा २१(३) मा निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जसअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी उल्लेख भएको छ ।
यसैगरी धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयमा आफैं वा स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने भनी उल्लेख छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को यस व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको सन्ताउन्नौं सेसनले १२ जुलाई १९९६ मा व्याख्या गरेको थियो । नेपालसमेत सदस्य राष्ट्र रहेको यस प्रतिज्ञापत्रको प्रावधानलाई क्षेत्रीय रूपमा रहेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा बडापत्रहरूमा पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
स्वाभाविकै रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्दा विकल्पहरूको बीचमा प्राथमिकता तोकिन्छ । एउटा मात्रै दल वा उम्मेदवार भएको वा रहेको चुनावमा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक दलको भूमिका उपयुक्त उम्मेदवार दिनु पनि हुन्छ । उम्मेदवार थोपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रजातन्त्रको दिगो र संस्थागत विकास गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ यसमा राजनीतिक दलले जनताको वास्तविक सहमति पहिल्याउन आवश्यक प्रक्रियाहरूको निर्धारण आफैं गर्नुपर्छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीसम्बन्धीको एक मुद्दाको निर्णयमा जनताले उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र भए मात्र त्यस्तो निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्छ भनी उल्लेख गरेको छ । २०७० सालमा प्रस्ट रूपमा सर्वोच्चले अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्न सकिने अधिकारलाई मानेको थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा यसको व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचा पनि परिवर्तन गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, आदेशअनुसार कानुन नबन्नु दुःखद पक्ष हो । सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई अवमूल्यन गरेर विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकिन्न । तसर्थ दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१५